Ankatoky ny fety marina isika izao ka dia nirongatra ny asan-jiolahy taty. Fanafihana dokotera no nitranga, rehefa avy nomeny poizina ny amboa ka maty dia niditra ireto jiolahy nitaona ny entana, rehefa tapitra notaominy ny entana, dia nofohaziny ireto tompon-trano ka norahonany oe aiza ny vola sy ny volamena, raikitra ny horohoro, vola kely nefa no tao an-trano, ilay ramatoa kosa tazan'ilay jiolahy fa nisy ravaka volamena ko norahonany. Fetsy ilay ramatoa, nesoriny ilay ravaka ka natsipiny, iny haka azy iny ilay jiolahy dia nitsofoka tany anaty chambre hafa ilay ramatoa, raikitra ny gidragidra sy ny koka (fiantsoana vonjeo), taitra ny iray tanana ka vaky rifatra nandositra ilay jiolahy. Nametraka ny fitoriana isaky ny ambaratonga ity niharamboina, fantatra fa tratra t@ny Alatsinainy teo ilay jiolahy, izay efa fantatra fa jiolahy mbola migadra sy gaigy lahy. Iza no namoaka azy tao am-ponja??